समाचार Archives - Page 32 of 33 - Eall Nepal
नेपाल र बेलायतबीच सुगौली सन्धि भएको २०० वर्ष पुगिसकेको छ । दुई सय वर्षअघि नेपाली शीर तत्कालिन अंग्रेजका सामु झुकेर नेपालको मेची र महाकाली पारीको जमिन गुमाउनु परेको थियो । तर सन् १९४७ मा बेलायतबाट ...
आहार विहार, समाचार
आउनै लागेको माघे संक्रान्तिमा यसरी स्नान गर्नाले बर्षभरीको पाप पखाली पुण्य कमाउन सकिने… माघे संक्रान्तिको दिन पवित्र नदीमा स्नान गरेर सुर्यलाई अर्घ्य दिने परम्परा रहिआएको छ। ज्योतिष शास्त्रअनुसार ९ ग्रह मध्ये सुर्यलाई राजा मानिन्छ। सुर्य ...
धार्मिक, राशिफल, समाचार
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) Ariesयो वर्ष संघर्षमय पूर्वार्धको संक्रमण पार गर्दै उत्तरार्धमा विशेष उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भइनेछ। प्रारम्भमा व्यवसायमा उतारचढाव आउनेछ। जेठ ६ देखि मंसिर १ ...
सबैभन्दा बढी यौन सन्तुष्टि कुन देशका मानिसहरुले प्राप्त गर्छन्, होला? यो प्रश्नमा पक्कै पनि तपाईंको उत्तर खुला समाज भएका कुनै पश्चिमा देश हुन सक्छ । खुला समाज भएका मुलुकहरुमा यौनजन्य रोगमा कमी, टिन प्रेगनेन्सी, ...
आहार विहार, जानकारी, समाचार, स्वास्थ्य
बदामको कोलेस्ट्रोल विनियमन (Cholesterol Regulation) नै सबैभन्दा प्रख्यात फाइदा हो ! बदामलाइ दैनिक सेवनपनि गर्न सकिन्छ ! प्रतिदिन २२ देखि २४ सम्म बदाम सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ ! अनेक सोधहरु द्वारा थाहा भए अनुसार दैनिक ...